जानि राखाैँ : लिपस्टिकबारे केही रोचक र अचम्मका तथ्यहरू ! | Investopaper
जानि राखाैँ : लिपस्टिकबारे केही रोचक र अचम्मका तथ्यहरू !
प्रायः महिलाहरुले सुन्दरताको लागि प्रयोग गर्ने लिपस्टिक (लाली)का बारे धेरै तथ्य कमैलाई थाहा हुन सक्छ । आजभन्दा पाँच हजार वर्ष पहिलेदेखि लिपिस्टिक लगाउने परम्पराको सुरुआत भएको इतिहासकारहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस समयमा लिपिस्टिक सुन्दरताको लागि नभइ विवाह गरेका महिलाहरुले मात्र समाजमा आफ्नो पहिचानको लागि लगाउने गर्दथे । सम्पति, इज्जत र प्रतिष्ठाअनुसार पुरुषहरुले पनि लिपस्टिक लगाउने गदर्थे । पुरुषहरुले विशेषगरी आँखा र निधारमा विभिन्न आकृति बनाइ लिपस्टिक लगाउने गर्दथे भने महिलाहरुले ओठमा लगाउँथे ।
‘मेसोपोटामियाको’ सभ्यताबाट सुरु भएको लिपस्टिक परम्पराको थालनी गर्ने श्रेय भने इजिप्टको महारानी क्लियोपेट्रालाई बढी दिइन्छ । महिलाहरुले आफ्नो सुन्दरता देखाउन लिपस्टिकअनिवार्य हुन्छ भन्ने धारणा उनैले स्थापित गरेकी थिइन् ।
महारानि क्लियोपेट्राले लगाउने लिपिस्टिक कारकाइन बिटल अर्थात् गोब्रेकिरा र कमिलालाई मारेर बनाइएको प्राकृतिक रङबाट बन्ने गर्दथ्यो । यस्तो रङ रातो गाढा हुने गर्दछ । त्यतिखेर लिपस्टिक लगाउनाले बिहानको खाना खाइसकेको संकेतकोरुपमा बुझिन्थ्यो । त्यस्तै, महिलाहरुले कालो रङको लिपस्टिक लगाउनुको अर्थ कसैसँग नबोल्ने भन्ने संकेतको रुपमा बुझिन्थ्यो ।
म्यानचेस्टर विश्वविद्यालयको अध्ययनअनुसार एक महिलाले सरदर आफ्नो जीवनकालभरि दुई लाख रुपैयाँ बराबरको लिपस्टिक किन्छन् । त्यस्तै, एक महिलाले एकपटकमा लिपस्टिक लगाउन सरदर सात सेकेन्डको समय खर्च गर्छन् ।
संसारको सबैभन्दा महँगो ‘गुएरलैन्स किसकिस गोल्ड’ नाम गरेको लिपस्टिकको नेपाली मूल्य करिब ६२ लाख रुपैयाँ छ । यसमा ११० ग्राम सुन र १९९ ओटा हिरा राखेर बनाइएको छ ।
अमेरिकामा सन् १९१२ मा महिलावादी एलिथावेथ क्याडिर र उनका साथीहरुले निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारलाई जिताउन पहिलोपटक ‘लिपस्टिक आन्दोलन’को सुरुआत गरेका थिए । जुन अहिले पनि ‘नेसनल लिपस्टिक डे’ को रुपमा मनाइने गरिन्छ ।
संसारका ७० प्रतिशत महिलाहरु लिपस्टिक नलगाइ कुनै कार्यक्रममा उपस्थित हुँदैनन् । अहिले बन्ने गरेका गुणस्तरीय लिपस्टिकमा पनि विभिन्न प्रकारका किराहरुलाई मारेर उनीहरुको शरीरबाट निस्कने प्राकृतिक रङहरु मिसाइन्छ । जसमा सबैभन्दा बढी माछाको प्रयोग हुन्छ । (एजेन्सी)
← कुन उमेरमा कति घन्टा सुत्नु पर्छ ? न्याशनल स्लीप फाउण्डेशन के भन्छ ?
१५० डिग्री तापक्रम र ३० वर्षसम्म भोकै बाँच्छ सक्ने अनाैठाे जीव ! →